यो हप्ता: पढाइ व्यक्तिगत फाइल मा केन्द्रीय स्टकहोम
एक मिलनसार, बहिर्गमन, मिलनसार, सुखद र सकारात्मक मान्छे जो वर्ष देखि वर्ष संग एक आनन्दित देख, सकारात्मक गरेको र एक केटी संग यस्तै गतिविधिलाई को लागि एक गम्भीर सम्बन्ध छ । मेरो ठूलो आवेग छ, संगीत र खेल को ड्रम. अन्य गतिविधिलाई समावेश चलचित्रहरू हेरिरहेका र खेल, संगीत, र यात्रा । चाहन्छ. प्रकृति प्रेम वर्ष — पुरानो महिला । गम्भीर सामाजिक र घरेलू. वर्ष को पतिले, खुला झुकाउ, अभिनव र उपयोगी छ । म चाहनुहुन्छ गर्न सरल, मायालु र सुरक्षित हुन्छन् सम्बन्ध । यो बिगार्छ तपाईं को गर्मी मा, आफ्नो घर संग एक राम्रो भोजन अगाडि. प्रतिक्रिया गर्न. वर्ष, सेमी लामो, धेरै शारीरिक स्वस्थ छ । म हुँ एक प्रबन्धक र बिक्रि गर्ने व्यक्ति मा एक मध्यम आकारको कम्पनी संग धेरै राम्रो अर्थशास्त्र । चासो मा काम जिम मा, साइकिल, पुस्तकहरू पढेर, सुनेर संगीत, मनोविज्ञान, यात्रा र अधिक दिन्छ कि तपाईं को लागि एक उत्साह जीवन । एक महिला वर्ष मा छ जो आकर्षक र एक हास्य को अर्थमा. यात्राहरु, ठूलो खाना, अराजकता र पागलपन को शहर संग, ठूलो संगीत छ । सानो, बलियो, सेवानिवृत्त लागि देख, एक सुन्दर महिला मा — वर्ष संग नै दर्शन । एक जवान मानिस, को खोज मा एक सानो, पातलो र राम्रो केटी सबै उमेर । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि छ. तपाईं एक हास्य को राम्रो अर्थमा र एक मा आफ्नो आँखा, र हामीलाई बीच रसायन सही छ । म नियमित खेल खेल्न र फिट राख्न, म बारेमा एक इन्च लामो र बस्न. म हुँ एक मायालु र मायालु व्यक्ति माया गर्ने तालिम, कुक र नृत्य ।. तपाईं मा उपयुक्त उमेर । एक नयाँ सिक्का पसल छ सेवानिवृत्त मा स्टकहोम मा खोज को एक राम्रो मित्र पूरा गर्न आनंद से. तपाईं स्वस्थ, ताजा र विश्वसनीय, बस म जस्तै. राम्रो समय छ।», एक वर्षीया मानिस छ जो को लागि खोज गरिएको वर्ष को लागि संग सम्पर्क एक महिला । पूरा गर्न र मित्र बनाउन. म जस्तै माछा, जान लग र के एक राम्रो मालिश. त्यहाँ छ एक दुर्लभ, सरल केटी, जसले मलाई जस्तै, बताए जस्तै धेरै महसुस गर्न स्नेह, घनिष्ठता, चुंबन, र सुखद प्रेम मोमबत्ती र राम्रो खाना? चाखलाग्दो कुरा, यो छ एक वृद्ध व्यक्ति रुचि छ जो समाज, जसलाई तपाईं को लागि देख रहे लागि एक गम्भीर सम्बन्ध छ । यो मनमोहक छ कि तपाईं जवान छन्. सुन्दर र शान्त, एक्लै स्टकहोम मा. सुन्दर बाहिर मा.
यो राम्रो भेट्न एक महिला को एक अधिक परिपक्व उमेर । तपाईं हुन सक्छ, वृद्ध वा अधिक परिपक्व महिला फारम । विचार तिनीहरूले छौं दुवै भएको अधिक मजा । लागि देख, दुई मान्छे. सामाजिक, मिलनसार, मिलनसार, प्यारा र सकारात्मक केटा वर्ष को लागि देख, एक खुसी, सकारात्मक र केटी को लागि एक गम्भीर सम्बन्ध छ । मेरो ठूलो आवेग छ, संगीत र खेल को ड्रम. अन्य गतिविधिलाई समावेश चलचित्रहरू हेरिरहेका र खेल, संगीत, र यात्रा । एक बीचमा-वृद्ध केटा जीवित मा एक सानो घर मा. को गतिविधिलाई दर्शक । उहाँले यात्रा गर्न रुचि, खान राम्रो र पूरा मित्र, तर उहाँले कुनै सही बाँच्न. म खोजिरहेको छु एक महिला को सही उमेर । थकित भएर एक्लै । कसैले कुरा गर्न, कसैले केहि गर्न संग, कुरा गर्न कसैले, कसैले संग घनिष्ठ. प्रकारको, ध्यान दिएर, सहयोगी र इमानदार । म एक उच्च शिक्षा जस्तै खेल, साल्सा नृत्य, प्रकृति र प्रेम लागि सारा द्वीपसमूह. म हुँ धेरै वर्ष पुरानो हो । आफ्नो उमेर कुरा छैन, र तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक सानो. तपाईं को लागि देख रहे एक महिला को लागि एक वर्ष र माथि लागि आरामदायक हिट, केही खाना र हिँड्नुभएको, शायद केही वर्ष मा. यदि रसायन सही छ, तपाईं हुन सक्छ धेरै राम्रो । एक वर्षीया केटा ज्यान दक्षिण मा, गर्न चाहनुहुन्छ पूरा छ जो एक महिला नजिक वा बढी वर्ष पुरानो, पूरा गर्न चाहन्छ, एक पैदल लिन र सँगै हुन बहाना गर्नु सँगै । कुनै, कमर र तिध्रा बिचको भाग, पूरा गर्न चाहने बारेमा कुरा गर्न, थिएटर, सिनेमा र साहित्य? (जीवन को जिल्ला मा.) आधुनिक, जवान र सुशील-एक गर्मी महिला जो पूरा गर्न चाहन्छ संग एक मानिस एक हृदय छ । म मिलनसार छु, हास्यास्पद र उदार । रमाइलो राम्रो खाना, रक्सी । म छु व्यावहारिक र म गर्न कसरी थाहा सजाउनु. उहाँले शैली र उहाँले सही छ । नजिक स्टकहोम र धूम्रपान छैन. म के छ के छ, र तपाईं छौँ एक प्रेमी छ, पनि. मैत्री र मिलनसार वर्ष महिला चाहनुहुन्छ, एक असल मानिस लागि आफ्नो जीवन को बाकी. करिब एक मुसलमान वा जो एक व्यक्ति पक्षहरूमा मुस्लिम धर्म हो । केवल गम्भीर जवाफ छ, धन्यवाद ।: लामो र गम्भीर-वर्ष । म एक विधवा मा, तखतामा, र. म गाढा बाल र म छु, बितिसकेका । आशा भनिन्छ । एक महिला को लागि देख कसैले साझेदारी गर्न उनको जीवन । मेरो चासो हो संस्कृति, प्रकृति र जनावरहरू. म जस्तै रहेको रेस्टुरेन्ट र मा भाग लिन विभिन्न सांस्कृतिक घटनाहरू । एक महिला मा पुरानो उमेर पूरा गर्न चाहन्छ छ जो एक मानिस शान्त र उदार, प्रेम गर्ने कुरा र कुराहरू बनाउन जीवन खुसी र सकारात्मक छ । म साधारण गतिविधिलाई छ. अग्लो, सुसंस्कृत र रोचक । केवल इच्छा लागि गम्भीर जवाफ. महिला को वर्ष मा कल लागि एक सुन्दर, बुद्धिमान मानिस । म धेरै चासो र एक सानो कुकुर छ । म चाहन्थे एक लामो र आकर्षक सज्जन संसारमा. मलाई कल भने र सोध्न हामी केहि साधारण छ । जवान धेरै वर्ष को लागि देख को लागि एक सक्रिय मानिस, अधिमानतः गरेर उमेर लागि, प्रभावशाली सफलता । यो धेरै रोचक छ मलाई । एक महिला लागि, धेरै वर्ष को एक प्रेम सम्पर्क पुरुष र महिला एक मित्र रूपमा. म जस्तै नाच, मा गाउँछन् दल र बाहिर जान. बसोबास गर्ने एक मानिस मा स्टकहोम, हालै सेवानिवृत्त, लागि देख छ जो एक राम्रो लागि एक आरामदायक संग मारा । तिनीहरू दुवै स्वस्थ, ताजा र भरपर्दो. म राम्रो वर्ष समयमा लागि देख, नयाँ मित्र, दुवै पुरुष र महिला । म जस्तै सिनेमा, संगीत, जनावरहरू, हिड्ने, आदि. हामी तपाईं देखि सुन्न र खान यस्तो राम्रो सलाद. साल्सा चालक लागि देख रहे अनुयायीहरूलाई.
क्युबा वा नियमित? म रोजे दुवै. एक साल्सा साथी खोजे भइरहेको छ द्वारा एक केटा पश्चिमी उपनगरों मा. उहाँले पाता मलाई एक सानो भन्दा. हामी प्रत्येक अन्य मदत गर्न सक्छ अग्रिम मा नृत्य र विकास. -एउटा पुरानो मानिस पूरा गर्न चाहन्छ मित्र मा र आसपास क्षेत्र. पैदल यात्रा, साइकल, स्कीइंग, सिनेमा, नौकाविहार, संगीत, साहसिक, यात्रा, को पाठ्यक्रम. ? शायद क्रिसमस लागि दल? एक जीवन्त र निजी पार्टी । जवान — देख मित्र लागि विभिन्न गतिविधिहरु लागि, यस्तो यात्रा, फिल्म, थिएटर, आदि. शायद तपाईं संग नाच कसैले कहिलेकाहीं. यो प्रस्ट संग आफ्नो सुन्दरता र प्रेम लागि संस्कृति, महिला र पुरुष, धेरै वर्ष को लागि. थिएटर, प्रदर्शनीहरू, आदि, साथै रूपमा संग एक खाने माछा व्यञ्जनहरु र रक्सी । यो एक बलियो र चेतावनी, सेवानिवृत्त व्यक्ति संग एक सुन्दर घर मा दक्षिण । केटी चाहन्थे लागि संयुक्त राष्ट्र, स्पेनी, पानी, कुकुर, पुरुष, जन्म मा हुन सक्छ. क्षेत्र वरिपरि अस्टिन. किराए आवश्यक छ. एक महिला हँसमुख र सेवानिवृत्त नर्स चाहन्छ भाडा दुई कोठा र एक भान्सा द्वीप, खुसी मा विला. गैर-धूम्रपान कोठा । शान्त र चिंताशील. काम परिदृश्य को भ्यान. मेरो काम मा पत्रकारिता मुक्त छ र पूर्णतया द्वारा वित्त पोषित विज्ञापन । त्यसैले तपाईं बन्द आफ्नो डायरी भ्रमण गर्न
← र आधिकारिक साइट को पर्यटन मा इटाली
डेटिङ सिम्फरोपोल, मुक्त डेटिङ साइट बिना दर्ता →